स्त्रीले सु’धार्नु पर्ने पाँच स्वभाव त्यसपछि बन्नेछ घर स्वर्ग – eSidhakura
वाह ! नेपाली युवाले बनाएको यात्री मोटरसाइकल सार्बजनिक ! [मूल्य सहित]
श्रीमानलाई खानामा वि’ष मि’साएर खुवाइन्, मृ’त्युपछि आफैं जा’हे’री दिएर जोर्डन भा’गिन् !
सार्वनजिक भयो नेपालमा बनेको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल, यस्तो छ मूल्य र फिचर !
खाली भएका ग्यास सिलिण्डर तत्काल भर्न उपभोक्तालाई अनुरोध
मुख्य पृष्ठरोचकस्त्रीले सु’धार्नु पर्ने पाँच स्वभाव त्यसपछि बन्नेछ घर स्वर्ग
स्त्रीले सु’धार्नु पर्ने पाँच स्वभाव त्यसपछि बन्नेछ घर स्वर्ग
काठमाडौं- राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जीवन एकदम राम्रो हुन्छ । अनि त्यसै गरी राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्रीको जीवन स्वर्गीय हुन्छ ।तर यी दुई जना मध्ये एक जना नराम्रो भयो भने दुवैको जीवन न’र्क समान हुन्छ ।
कतिपय मानिसहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ, जसले एक अर्काको जीवन न’र्क बनाउँछ । हामीले महिलाहरूमा पाइने ५ नराम्रा स्वभावबारे जानकारी गराउँदै छौँ, त्यसो त पुरुषहरू चाही सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने होइनन् । पुरुषका कारण पनि सम्बन्धमा धेरै स’मस्या आउन सक्छन् । यहाँ स्त्रीहरूको ५ स्वभावको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
१. पतिलाई आफ्नो मात्रै ठान्ने- पति आफ्नो मात्रै हो वा उसको अरूसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने महिलाले हरेक पुरुषको जीवनलाई स’ङ्कटमा पारिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको स्वार्थी सोच राख्ने महिलाले पुरुषको सार्वजनिक जीवन ध्व’स्त पारिदिन्छन् । फलस्वरुपः हरेक पुरुष आफ्ना बाबु आमा, इ’ष्टमित्र, साथीभाइ तथा सहकर्मीबाट टाढा हुन बा’ध्य हुन्छन् ।
२. न’मिठो वचन बोल्ने-वचनको वाण निकै घा’तक हुने गर्दछ । चर्को र क’र्कश स्वरले सम्बन्धमा द’रार पैदा गर्न भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । जीवनका हरेक पलहरू निकै आ’घातपूर्ण हुने गर्दछन् । तर यसको ठिक वि’परीत, मीठो र भद्र वचन बोल्ने महिला जीवनसाथी बनेमा एउटा पुरुषको जीवन अ’मृतमय बन्छ ।
३. मनि मा’इन्डेड अर्थात् पैसालाई मात्र महत्त्व दिने- आफ्नो श्रीमानले सधैँ पैसा मात्रै कमाओस् भन्ने सोच भएका महिलाहरूले हरेक पुरुषलाई पैसा कमाउने मे’शिनबाहेक अरू केही ठान्दैनन् । दाम्पत्य जीवनमा पैसाले प्रेम, समर्पण र बफादारिताको ठाउँ लिएपछि आ’त्मीयता भन्ने कुरा हराउँछ। पैसाप्रति मात्रै आ’शक्ति राख्ने आफ्नो पतिको मात्रै होइन आफ्नै जीवन पनि निकै नि’रस बनाउँछन् ।
४.क’चकचे र रु’न्चे- सामान्य कुरामा पनि कि’चकिच गर्ने र रुन्चे स्वभावका महिलाले पनि पुरुषको जीवनलाई नराम्रो अ’सर पारिरहेका हुन्छन् । दिनहुँको गनगन क’चकच र गु’नासोले पुरुषको मनोबल गिर्दै जान्छ । यस प्रकारको स्वभाव भएका महिलाले पुरुषलाई हौसला दिनुको सा’टो उसको जीवनलाई नि’राश र कु’ण्ठाग्र’स्त बनाउँछन् ।
५. ह’स्तक्षेपकारी स्वभाव- कुनै-कुनै महिलाले पुरुषले गरेका हरेक काममा ह’स्तक्षेप गर्न मन पराउँछन् । यसरी ह’स्तक्षेप गर्दा आफूले जि’तेको महसुस गर्दछन् । तर यस्तो कार्यले पुरुषको जीवनको स्वतन्त्रता तथा नि’जत्व समाप्त हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई अलिकति पनि ख्याल हुँदैन । अनि स्वत’न्त्रताविनाको जीवन नि’रस हुने नै भयो ।
घरमा सुख शा’न्ति चाहनुहुन्छ, अनिवार्य रुपमा गर्नुहोस यी कार्य
करोडपति मात्र हैन अर्बपति पनि बनाउँछ यस्तो योगले
घरमा यी ६ चिज राख्नले मिल्दैन लक्ष्मी माताको साथ !! जानिराखौँ
सेलिब्रिटीको ह’र्कत : बच्चालाई दूध पिलाउँदै रे’डवाइनमा मस्त
पर्समा यी ५ च’मत्कारी चीज राख्नुहोस् सधैं धनसम्पति ब’ढिरहनेछ…
दुर्लभ घटना: फरक रङको देखियो चन्द्रमा, ज्योतिष भन्छन् ‘राम्रो योग होईन, ठुलो घटना हुनसक्छ’
बिहान धेरै सुत्दा दि’माग दुई गुणा बढी चल्ने !
बि’रामी हुँदा प्रिय मान्छेले हात समाए ‘पे’नकिलर’ले बराबर काम गर्छ-
आज वर्षभरिकै सबैभन्दा छोटो दिन !
निद्रामा कसैले सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी चाप्छ ? के हो एठन ?